काठमाडौंमा भोलिबाट नि:शुल्क पीसीआर परीक्षण गरिने मेयर शाक्यको भनाई ! – yuwa Awaj
काठमाडौंमा भोलिबाट नि:शुल्क पीसीआर परीक्षण गरिने मेयर शाक्यको भनाई !
मंग्सिर ६, २०७७ शनिबार 3
काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले नि:शुल्क कोरो’ना परी’क्षणको तयारी भएकाे बताउनु भएको छ । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मेयर शाक्यले आईतबारबाटै नि:शुल्क पीसीआर परी’क्षण थालिने बताउनुभयो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले को’रोना परी’क्षणको दा’यरा बढाउने हे’तुले भोलिबाट नि:शुल्क पीसीआर परी’क्षण सुरु गर्न लागेकाे उहाँकाे भनाइ छ । को’रोना सं’क्रमितको कन्ट्या’क्ट ट्रेसि’ङमा परेका अशक्त र जेष्ठ नागरिकको लागि मोबाइल भ्यान सञ्चालन गरेर स्वा’ब संकलन गर्न गरिने बताउनु भयो ।
महा’नगरको यो कार्यले काठमाडौं उप’त्यकामा को’रोना सं’क्रमितको संख्यामा न्यून ल्याउन सघाउ पुग्ने आशा रहेको बताउनु भएको छ । उहाँले को’रोना महामा’रीको यो चक्र तोड्न भनाई क’डा कदम चाल्नु पर्ने बताउनु भएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रको विकास अब हुन्छ : मन्त्री भट्ट
टीकापुर : उद्योग, वा’णिज्य तथा आ’पूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले को’रोनाका कारण प्रभा’वित औद्योगिक क्षेत्रको विकास विस्तारै फस्टाउँदै जाने बताउनुभएको छ। कैलालीको टीकापुरमा रहेको खाद्य गो’दामको आज अव’लोकन गर्दै उनले औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा सरकारले उच्च प्राथमिता दिएको जान’कारी दिनुभयो ।
उहाँले टीकापुरमा मैदा कम्पनी र बर्दियाको राजापुरमा चिउरा मिल सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । “लम्की, टीकापुर, नारायणपुर, ख’क्रौलासँगै हुलाकी स’डक जोडिएकाले यहाँको उद्योग व्यापार फस्टाउने छ ।
यसमा पनि यस क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गाको पनि कमी छैन, “मन्त्री भट्टले भन्नुभयो, “स’डक स’ञ्जाल अव्यवस्थित भएकाले व्यवस्थित गर्न ज’रुरी छ ।
स’डक व्यवस्थित भए टीकापुर क्षेत्रको सम्भावना धेरै छ ।
कार्यक्रममा टीकापुर नगरपालिका प्रमुख तपेन्द्रबहादुर रावलले टीकापुरमा फ्लोर मिल र औद्योगिक क्षेत्र सञ्चा’लन गर्न आ’ग्रह गर्नुभयो । रासस
Prevनेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेलाई चितवनमा आफ्नै कार्यकर्ताले लखेटे…हेर्नुहोस् ।(भिडियो सहित)
Nextओलीले भ्रष्टाचार गर्दिन-गर्न दिन्न भन्नु र पागलले म पागल होइन भन्नु एकै हो – डा.प्रकाश चन्द्र लोहनी